कलियुगका कुरा: लोगो लुकाको सभासद भनेर कुट्ने हुन् कि?
लोगो लुकाको सभासद भनेर कुट्ने हुन् कि?
भाको एउटै कोट नि दराजाँ कपुर राखेर थन्काको धेरै भयो, न जाडो न गर्मी, यही बेलाँ लाउन परो भनेर अफिस लार आ'को। केटाहर्ले सभासद भनेर हैरान पारे यार। कता पब्लिक बसाँ घर फर्किदाँ पिटाई खाइने हो कि भन्ने चिन्ता छ; सभासदसँग खुब रिसाछन् जनता - कता लोगो लुकार हिंडेको सभासद भन्दै मान्छेले कुट्ने हुन् कि...
Aakar November 10, 2010 at 9:14 PM
अब चाँहि कुट्नै पर्ने बेला आ'को छ ! :D